Home Wararka Askari eedaysane ah oo lagu soo oogay dil oo maanta la maxkamadeyay
Askari eedaysane ah oo lagu soo oogay dil oo maanta la maxkamadeyay
Waxaa ay Maxkamada ciiidamada qalabka-sida, qaybta Galmudug ay maanta u fadhiisatay gar-maqalka dacwad ciqaabeed dil ah oo uu ku eedeeysnaa dable Booliis Maxamed Baryare Daahir oo ka tirsan ciidanka booliiska degmada Matabaan kuna eedeeysan dil Matabaan loogu geystay 30/4/2021 marxuum lagu magacaabi jiray ex dable Booliis sharmaake Cilmi Maxamuud.
Fadhiga maxkamada ayaa gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka-sida ee Galmudug Gaashaanle Dhexe Cabdulaahi Abuukar Xasan waydiiyey eedeysanaha jawaabtiisa la xiriirta eeda Xafiiska xeer ilaalinta maxkamada Ciidamada. Eedeysane dable Booliis Maxamed Baryare Daahir oo ka jawaabayay waydiinta gudoonka maxkamada ayaa sharaxey sida gacantiisa ugu baxey marxuumka geeriyoodey.
Xeer ilaaliaha maxakamada Ciidamada Qalabka sida ee qaybta Galmudug G/sare Cabdulaahi Maxamed Muuse Keyse ayaa isna maxkamada ka hor aqriyay eedeeymaha loo heysto dable Booliis Maxamed Baryare Daahir, isagoo dalbadey in in la mariyo ciqaab u dhiganta dambiga lagu soo eedeeyay. Abuukaate Xalane oo dhankiisa duray habka dacwad oogista xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamada ka dalbadey in iyadoo la tixgalinayo qiraalka eedeeysanaha iyo qaabka uu u dhacay dilka uu geystay loo fududeeyo ciqaabta.
Go’aanka maxakmada ayaa dib loo dhigay ilaa want danbe